Umkhiqizi we-Adhesive Copper Tape ehamba phambili kanye Nefekthri |Civen
2L Flexible Copper Clad Lam...
I-HTE Electrodeposited Copper...
I-ED Copper Foils ye-Li-ion ...
I-tape ye-foil ye-copper conductive eyodwa ibhekisela ohlangothini olulodwa olunendawo yokunamathisela engaphezulu kakhulu, futhi engenalutho ngakolunye uhlangothi, ukuze ikwazi ukuqhuba ugesi;ngakho ibizwa nge-single-sided conductive copper foil.
Thumela i-imeyili kithi Cela Isampula
I-copper foil tape ingahlukaniswa ibe ucwecwe lwethusi olulodwa futhi oluphindwe kabili:
Ucwecwe lwethusi olunamaceleni amabili lusho ucwecwe lwethusi oluphinde lube ne-adhesive coating, kodwa lokhu kunamathela okunamathelayo kubuye kube yi-conductive, ngakho kubizwa nge-double-sided conductive copper foil.
Olunye uhlangothi luyithusi, olunye uhlangothi lunephepha elivikelayo;Phakathi kune-adhesive ye-acrylic ezwela ukucindezela evela kwamanye amazwe.I-foil yethusi inokunamathela okuqinile nokwelula.Ngokuyinhloko kungenxa yezinto ezinhle kakhulu zikagesi ze-foil zethusi ukuthi ngesikhathi sokucubungula kungaba nomthelela omuhle wokuqhuba;okwesibili, sisebenzisa i-nickel enamathelayo enamathelayo ukuze sivikele ukuphazamiseka kwe-electromagnetic ebusweni be-foil yethusi.
Ingasetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukene zama-transformer, omakhalekhukhwini, amakhompyutha, i-PDA, i-PDP, iziqapha ze-LCD, amakhompyutha we-notebook, amaphrinta neminye imikhiqizo yasekhaya yabathengi.
Ukuhlanzeka kwe-foil yethusi kungaphezu kuka-99.95%, umsebenzi wayo ukuqeda ukuphazamiseka kukagesi kagesi (EMI), kuhlukanise amagagasi kagesi ayingozi kude nomzimba, kugweme ukuphazamiseka okungafuneki kwamanje kanye nogesi.
Ngaphezu kwalokho, ukushaja kwe-electrostatic kuzomiswa.ihlanganiswe ngokuqinile, izakhiwo ezinhle zokuqhuba, futhi ingasikwa ngosayizi abahlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ithebula 1:Izici ze-Copper Foil
Okujwayelekile(Ukuqina kwe-Copper Foil）
0.018mm Uhlangothi olulodwa
0.018mm Izinhlangothi ezimbili
0.025mm Uhlangothi olulodwa
0.025mm Izinhlangothi ezimbili
0.035mm Uhlangothi olulodwa
0.035mm Izinhlangothi ezimbili
0.050mm Uhlangothi olulodwa
0.050mm Izinhlangothi ezimbili
Amanothi:1. ingasetshenziswa ngaphansi kuka-100 ℃
2. Ubude bucishe bube ngu-5%, kodwa kungashintshwa ngokuvumelana nezimfuneko zekhasimende.
3. Kufanele igcinwe ekamelweni lokushisa futhi ingagcinwa isikhathi esingaphansi konyaka owodwa.
4. Lapho isetshenziswa, gcina i-adhesive side ihlanzekile ezinhlayiyeni ezingafunwa, futhi ugweme ukusetshenziswa ngokuphindaphindiwe.
Okwedlule: Ukuhlobisa I-Copper Strip
Olandelayo: I-Electrolytic Pure NickelFoil
I-Electrolytic Pure NickelFoil